Hery - Tsiky dia ampy | Kanto |
2015-03-27 @ 14:26 in Vaovao, Kanto
Misy niece-ko kely izay tena miondana One direction mihitsy (hany ka fantatro fa onedirection ny mot de passe-ny) :-) Nilazako izy, vao tsy ela akory izay, hoe "mbola vao 12 taona indry izao fa efa nandalo niondana mpihira tahaka izany daholo izahay. Fa rehefa lehibe any aoriana any dia adino ho azy ireny mpihira ireny indrindra tsy maintsy hisaraka ny tarika." Dia notantaraiko ny ohatra akaiky indrindra nampisaraka ny Take That nisy an'i Robbie Williams. Dia namaly tamim-pahendrena izy hoe "Rehefa lehibe aho, manana zafikely, dia fantatro fa mety efa tsy misy intsony ny One Direction, efa nisaratsaraka, samy efa niteraka sns, fa tantaraiko amin'ny zafikeliko hoe mpihira tena tiako be izany One Direction izany".
Tamin'ny 25 marsa teo tokoa dia niala tao amin'ny One Direction i Malik... fa angamba nahita direction vaovao. Ilay Album farany navoakandry zareo dia mitondra ny lohateny hoe "Four". Na dia milaza ny album faha-efatra aza dia toa tsindrimandry sahady hoe ho 4 sisa izy ireo. Asa izao nanahoana tokoa ilay nièce keliko fa i Malik no anisan'ny tena tiany... amin'ilay gasigasy fihetsika :-p
Coupe du monde by Marcello Barenghi
2014-07-10 @ 07:58 in Kanto
Sary vaovao nataon'i Marcello Barenghi indray amin'izao fotoanan'ny Mondial izao. Rehefa tsy nahazo ny amboara ihany ny Italiana dia aleo atao sary mitovy amin'ny tena izy. Dia ankafizo ny nanamboarany azy.
Rossy - Ino Vaovao
2008-04-18 @ 12:12 in Kanto, Politika
Araka ny heno izany dia any Dago Rossy ary dia ho raikitra ihany (angamba) ny fampisehoana ataony ao Antananarivo amin'ny 27 aprily izao.